Ny menaka mandalo ho an'ny volo - fampiharana, menaka mandanja ho an'ny fitomboan'ny volo
Mandany menaka mandalo amin'ny volo - fomba 8 ampiasaina tsara
Ny menaka alanina ho an'ny volom-bolo dia ampiasaina mandritra ny valo arivo taona. Azo ampiasaina amin'ny fampiasana ny tenany izany, mifangaro amin'ny solika voajanahary hafa na amin'ny endriky ny masony. Ny famenoana vitaminina dia manampy amin'ny famokarana herisetra mahery vaika.
Almond Oil - Properties
Manana menaka mandomando sy loko mavo, ny alika mandalo dia mahita ny toerany amin'ny teknika ara-pitsaboana sy kosmetika. Ny fahaiza-manaon'ity vokatra ity dia fantatra:
fampiakarana ny famerenana indray;
famatsiana sy fikarakarana;
fanafoanana ny areti-maso;
fanamaivanana ny tsy fahampiana amin'ny fandoroana;
laxative vokatra rehefa nalaina am-bava;
fanasitranana fanasitranana ary maratra kely.
Ao amin'ny toeram-pivarotana dia misy menaka manitra hafa, ny toetra misy azy ireo dia voatanisa etsy ambony. Ny fahasamihafana dia eo amin'ny fomba famokarana, fampitahana sy fomba fampiasana. Ny menaka tena ilaina dia avy amin'ny vokatry ny alika mangidy, avela ho azo ampiasaina fotsiny avy eo. Ny vokatra dia manjavona haingana, tsy mamela ny marika fery. Amin'ny endriny madio, ny singa tena ilaina dia tena tsy fahampian-tsakafo, mila fototra matavy izy io, toy izany koa ny menaka mandalo amin'ny volo dia singa misy singa maromaro.
Alika kosmetika misy almonds
Ny vokatra dia entin'ny menaka mangatsiaka ny taolana alamaina mamy ary tena vonona amin'ny fampiasana azy. Tsy voafetra amin'ny fampiharana ivelany fotsiny, raha ilaina, dia raiso ny fandraisana ao anatiny. Ny menaka kosmetika ho an'ny volo dia azo ampiana amin'ny ethero mba hahazoana ny hatsaran-tarehy tsara tarehy, cocktail, akora hafa, mamorona masoko, na mampiasa solosaina.
Inona no mahasoa ny menaka mandalo amin'ny volo?
Ny vokatra tsara azo dia vokatry ny rafitr'ity trano ity:
vitamina A, E, B2;
Amin'ny voalohany, misy vihy misy poizina ao amin'ny atody, fa ao anatin'ny dingam-pamokarana dia esorina avy amin'ny singa, noho izany dia azo antoka ny vokatra. Azo ampiasaina amin'ny fihenan'ny hoditra izy io, saingy raha misy fisalasalana dia azonao atao ny mijery ny faritra kely. Ny menaka mandanja ho an'ny volo dia mahasoa ny fahafahany manatsara ny fitombony, manangona ny fakany sy ny hoditra amin'ny zavatra ilaina, ary koa ny hanafoanana ireo tsy fahampiana efa misy.
Olon-menaka ho an'ny volon'ondry
Ny tompon'ny hôpitaly amin'ny vatana matavy dia matetika tsy misintona ny solika noho ny tahotra ny hampitombo ny fahatsapana ny fahasimbany. Ireo tahotra ireo dia tsy voamarina foana, ny tombotsoan'ny menaka mandomando amin'ny volo amin'ny olana toy izany dia toy izao manaraka izao:
fanasitranana ny ratra be loatra;
fanafoanana ny alahelo;
fanakanana ny fiovana mifandraika taona.
Olon-menaka ho an'ny volo maina
Amin'ny toeram-pandrika toy izany, ny vokatra azo avy amin'ny menaka mandomando amin'ny volom-borona dia hitondra vokatra mahavariana. Ny volon'ny volo matetika dia miavaka amin'ny tsy fahampian-tsakafo, mora simba, manjary masiaka ary very ny satany. Ireo vatary azo antoka dia hameno ny fihavanam-bozaka, noho izany, ny menaka mandalo ho an'ny volo dia hanatsara ny fahasalamany atsy ho atsy noho ny marika famantarana:
Olon-menaka ho an'ny volo - fampiharana
Na dia tsy misy olana goavana aza, ny volo dia azo atao tsara kokoa. Misy fomba maro samihafa, fomba fampiasana menaka mandomando amin'ny volo, tsara ny mifantoka amin'ny toetrany.
Mangatsiaka - ny vokatra dia manalefaka ny fakany sy ny lavany rehetra aorian'ny fanasana, avy eo dia averimberina indray ny indroa isan'andro amin'ny andro iray ihany. Azonao atao ny manamboatra dipoavatra dipoavatra ilang-ylang na lavanila. Ho fampivoarana ny fizarana, dia miparitaka eo amin'ny masomboly ny firafitra. Raha tsy mandeha io fomba io, dia azonao atao ny mampihatra azy io amin'ny sehatra madio, ary averimbereno matetika izy ireo. Ohatrinona ny ilainao hananana menaka mandalo ao amin'ny volonao, dia miankina amin'ny halehiben'ny fahasimbany, fa tsy mihoatra ny antsasak'adiny.
Ny menaka e - mando menamena ho an'ny volo toy izany dia apetraka mandritry ny antsasak'izay alohan'ny hisasana, aloha voalohany dia mihodina ao amin'ny hoditra. Ampy kely ny 1-3 teaspoons, raha toa ianao ka mamehy ny tady, dia ho mora kokoa ny mihatra. Mba hampitomboana ny vokatra, mifangaro ny menaka oliva citrone, sedera na bergamota.
Olomangan'ny menaka ho an'ny fitomboan'ny volo
Ny vokatra dia miasa tsara eo amin'ny hoditra, noho izany dia tsy mila fahalalana manokana momba ny fomba fampiasana menaka mandalo ho an'ny volo, azonao ampiharina izany ary miandry vokatra tsara. Mba hahatonga azy ireo ho tsara kokoa, dia atolotro ny iray amin'ireto masonao manaraka ireto.
Ny ampahany sasany amin'ny menaka mandarin, ny clave ethereal, ny jiro (cinnamon) ary ny menaka meliss dia mifangaro. Mba hisorohana ny fihanaky ny fiterahana, ny volo, nopotehina tamin'ity vondrona ity, dia voafehy anaty polyethylene. Afaka manasa ny lohanao amin'ny ora iray ianao.
Ao anatin'ny litera iray litatra misy rano mafana, mila mamongotra ny taim-boromailala iray sy ny poezia menaka ianao, ampio ny ampahefatry ny jogora sy ny jibôka, mampihetsi-jaza mandra-pahamaivana. Ny masomboly ho an'ny volom-boanjo miaraka amin'ny menaka mandia dia ampiharina amin'ny lavany manontolo. Tokony hosokafana amin'ny kapaoty plastika sy lamba famonosana ny loha. Voasary antsasak'adiny ny sofina.
Olon-menaka avy amin'ny fihenan'ny volo
Raha ny antony mahatonga ny volo no mahatonga azy amin'ny fahalemen-tenany amin'ny alàlan'ny tifitra maro, ny fikolokoloana simika ary ny fomba fanamafisam-peo, dia hanampy azy ireo ny sakafo fanampiny. Ny menaka Almonda manohitra ny fihenan'ny volo dia mahomby noho ny firafitry manankarena. Ny fampiasana solosaina ny fitaovana dia hanampy amin'ny fanamafisana, fa ny fianarana lava dia takiana. Ho an'ny ezaka mahery vaika kokoa, ny fanolorana manaraka dia soso-kevitra.
Ilaina ny mampihatra menaka mandomando amin'ny volo amin'ny alina, mampifanitsy ny sotrokely amin'ny teaspoons of jojoba sy ny menaka mitsangana, ary manivana miaraka amin'ny menaka birque roa. Tsy maintsy hafanana ny loha, ary amin'ny maraina, manasa tsara ny fitomboan'ny voankazo.
Manolora siramamy roa misy ravina sy menaka manda, mihodina amin'ny volo ary miforitra amin'ny sarimihetsika. Aorian'ny ora iray dia nesorina ireo sisa tavela amin'ilay fitotoana, ho mora kokoa ny hanasa azy ireo raha toa ka mampiasa ny jiolahy aloha ianao, ary avy eo ny shampoo. Manatsara ny fitsaboana amin'ny ra ny firafetan-damba, manome ny bakteria ny sakafo mahavelona amin'ny fitomboan'ny volon'ala vaovao.
Mba hanatsarana ny fifindran'ny rà, dia misy menaka misy menaka sy kognosa (amin'ny 1: 1). Ampiasao izy io, mipetaka tsara ao anaty fakany, ary mizara tsikelikely ny halavany. Tazony mandritra ny 30-60 minitra ilay saron-tava.
Olomangan'ny menaka ho an'ny hoditra
Ireo tompon-trano lava volo no miatrika ny fizaran-tseza sy ny fanamainana ny endriny, mitranga izany noho ny antony maro samihafa, ny iray amin'ireo dia tsy fisian'ny sakafo eto amin'ity faritra ity. Mba hisoloana azy dia mila mifidy ny fomba hampiharana menaka mandalo amin'ny volo ianao - amin'ny ampahany na amin'ny ampahany amin'ireto masony ireto.
Ny menaka sy ny menaka ary ny dibera dia tokony hampifangaroina amin'ny 1: 1: 2 ary mifangaro. Ny akora mafana dia ampiharina amin'ireo faritra simba ary voatazona mandritra ny antsasak'adiny, aorian'izany dia efa voasasa.
Ny halehibe mitovy amin'ny menaka mafana amin'ny kefir dia tsy maintsy mifangaro hatramin'ny fanamiana, hikombona ao amin'ny fakan'ny volo sy ny lavany manontolo. Ny fananganana dia hosasana rehefa afaka adiny iray amin'ny fanosotra amin'ny lohan'ilay tandroka.
Mba hanohanana ny elasticity foana, dia asaina mametraka menaka mandomanda kely amin'ny shampoo. Izany dia hanampy amin'ny fikarakarana mandrakariva ny volo tsy misy fotoana sy fanasana sarotra.
Birch tar - fampiharana amin'ny volo
Ony amin'ny fitomboan'ny volo
Manamafy ny volony any an-trano
Haavon'ny mainty hoditra
Epilators - izay tsara kokoa ny misafidy ny vokatra tsy voavaly
Ny tsimokaretina manimba
Fashionable Lofters 2016
Mendri-kaja amin'ny akanjo amin'ny akanjo
41 hevitra hoe ahoana no fomba handravanao ny tanimbolinao amin'ny tananao
Spaghetti miaraka amin'ny fety
Trendy mofomamy - Toetrandro 2016
Mehendi ao an-trano
Ahoana no hanaovana ny kitapo miaraka amin'ny tananao?
Wall-papiers, toerana malalaka
Fotsy fotsy amin'ny vatosoa
"Rehefa manome fanadihadiana aho, dia eritreretiko ho toy ny Deadpool aho." Niaiky i Ryan Reynolds fa nanahy momba ny korontana izy
Kirira avy amin'ny cherry mamy
Noho ny fikarakarana ny ronono avy amin'ny caterpillars?
Ny reniranon'i Montenegro
Fitiavana - ahoana no fomba fisafidianana, inona no tokony hosoloina ary ahoana no fomba hampifandraisana azy amin'ny fomba?